Java EE Learning Roadmap အကြောင်းပြောပြပေးပါ - MYSTERY ZILLION
Java EE Learning Roadmap အကြောင်းပြောပြပေးပါ
java ee developer ဖြစ်လာဖို့ဘာတေသိဘို့လေလာဘို့လိုလဲ
servlet,jsp တော့ ရပြီ
https://www.udemy.com/learning-java-ee-8/ မှာတော့ လေ့လာရမယ့် ခေါင်းစဉ်တွေတော့ ဖတ်ကြည့်နိုင်တယ်။
Java EE မှာမှ front-end, back-end အပါအဝင် တခြားအမျိုးအစားတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ learning path ကွာခြားတယ်လို့တော့ သိထားတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လိုင်းအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ လေ့လာရတာတွေလဲ ကွဲပြားသွားမှာပါ။
အောက်မှာပေးထားတဲ့ Oracle University လင့်ခ်မှာ သွားပြီးတော့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Enterprise Application Development with Java EE - Learning Path
Java EE Developer ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာထက် Java သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လေ့လာလို့ရနိုင်တဲ့ Scope အတိုင်းအတာကို ရေးလိုက်တာပါ။
JavaEE Learning Pathနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး JavaSEကို OOP အတိုင်းအတာကောင်းကောင်းသိပြီဆိုတာနဲ့ EE ဘက်ကိုသွားလို့ရပါပြီ။ Desktop Applicaiton Development ကိုစိတ်မ၀င်စားရင်တော့ Swing တွေ SWT တွေ FX တွေလေ့လာစရာမလိုပါဘူး။ JavaEE backend နဲ့ Frondend Client ကို web နေမလိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရေးပဲ Desktop Client အနေနဲ့လေ့လာထားတာမမှားပါဘူး။ JavaFX ကိုပေါ့။
Java Web Profile
ဒီနေရာမှာဆိုရင် JavaSE ကမကုန်သေးပါဘူး။ Java8 ရဲ့ Lambda Programming တွေ Stream တွေ Functional Style နဲ့ရေးလို့ရတာတွေ Design Pattern တွေကိုလေ့လာလို့ရသေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ EE လုပ်ရင်းနဲ့ဖြည့်ရမဲ့အရာတွေဆိုတော့ ခဏကျော်ထားလည်းရသေးတယ်။ ဒါပြီးရင် JavaEE ကိုမကိုင်ခင် JavaWeb နဲ့ပါတ်သတ်တာတွေစလေ့လာရပါမယ်။ Java EE မှာပါဝင်တဲ့အရာတွေကို Intro အနေနဲ့သိထားသင့်တာလေးတွေ ဖတ်ရုံဖတ်ထားပါ။ Java Web Application တစ်ခုရဲ့ Structure တွေ နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
အိုကေဒီထိရောက်လာမှသာ Java နဲ့ Web App တွေရေးနိုင်မှာပါ။ MVC ကိုစဖတ်သင့်ပါပြီ။ အခုကစပြီး Framework တွေစသုံးကြည့်ကြမယ်။ ကျတော်ကတော့Struts2ကို စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ Play, Grails လိုမျိုး အခြားသော Framework တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီမှာတင်ပဲ Java Web သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့အများကြီး ရေးလို့ရနေပါပြီ။ JDBC လောက်နဲ့ဆို မလိုပဲ code တွေရေးနေရတော့ Database နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ORM Framework တစ်ခုခုကိုလေ့လာသင့်နေပါပြီ။ Sorry ဗျာ အရေးကြီးတာကျန်သွားတယ်။ SQL လည်းသိထားဦးမှာဗျ။ RDBMS တစ်ခုခုသုံးနိုင်ရပါမယ်။ MySQL, MariaDB, PostgreSQL တွေထဲကတစ်ခုခုပေါ့။ Oracle ကတော့ Enterprise တွေမှာသုံးတာများတဲ့ product တစ်ခုဆိုတော့ OpenSource ထဲ့က ဆို MariaDB နဲ့ PostgreSQL ကိုသုံးစေချင်ပါတယ်။ MySQL ကတော့ Oracle ပိုင်သွားကတည်းက Free နဲ့ Commercial တွေခွဲပေးထားပေမဲ့ သိပ်မသုံးစေချင်ပါဘူး။ ORM ဆက်ပြောပါမယ်။ ORM ဘယ်အချိန်မှာစသုံးသင့်လည်းဆိုတော့
●You have3or more programmers onaweb application.
●Your database consist of 10+ tables.
●You have say 10+ queries to make.
ORM Frameworကိုသာသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် SQL ကို မေ့ထားလို့တောင်ရနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ JDBC ကို ကောင်းကောင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ORM သုံးရတာ အကြိုက်တွေ့မှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ MyBatis, Hibernate, JPA စတာတွေက ORM Frmework တွေထဲက တစ်ခုပေါ့ဗျာ။ Java EE Feature set ထဲမှာ JPA ကတစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ။
Java EE or Other Opensource
အိုကေ အခုအခြေအနေရောက်မှသာ JavaEE ဆိုတာကြီးကို စစဉ်းစားသင့်ပါပြီ။ Enterprise အဆင့် Banking Aplication လိုမျိုးတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး Handle လုပ်နိုင်ဖို့ သုံးရတဲ့ Feature တွေကနည်းတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ကစရွေးချယ်သင့်ပါပြီ။ JavaEE ကိုသွားမလား Spring ဘက်ကိုသွားမလား။ Spring ကို တော်ရုံ Web Application Framework တစ်ခုအနေနဲ့ပဲတော့ မမြင်စေချင်ပါဘူး။ တော်တော်လေးကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ Feature Set တွေနဲ့ JavaEE နဲ့အပြိုင်ဖြစ်လာပါပြီ။ အခု မိတ်ဆက်လာတဲ့ JavaEE8 လို့ပဲခေါ်ရမလား တကယ်တော့ Jakarta EE ဆိုပြီး ဖြစ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ သိပ်မသိလို့ JavaEE7 ရဲ့ Feature တွေကိုပဲရေးပါရစေ။
JavaEE7 မှာ ဘာတွေပါသလဲဆိုတော့......သုံးပိုင်းခွဲထားတာတွေ့ရတယ်။
Developer Productivity (Java EE7 - More Annotated POJO, Less Boilerplate Code)
HTML (WebSockets, JSON, Servlet3.1 NIO, REST)
Meeting Enterprise Demands (Batch, Concurrency, Simplified JMS)
Java EE7Specification တွေကိုတော့.....
Common ANnotations 1.1
Java Caching API
Java API for JSON
ဟူး.... ဟုတ်ပြီ ဒါတွေအကုန်သိဖို့လိုလားဆိုတော့....လိုအပ်သလောက်ပဲသုံးဖို့လိုတာဆိုတော့အောက်ကဟာတွေကိုပဲအရင်လေ့လာသင့်ပါတယ်။
1.Servlet 3.0 (Java Web Profile လေ့လာတုန်းကသိပြီးသားပါ။)
3.JSF (Struts2 ကိုမလေ့လာပဲ JSF ကိုပဲလေ့လာခဲ့ရင် OK တယ်။)
8.JPA (ORM Framework)
Spring ကတော့ spring.io မှာပဲ ဆက်လေ့လာကြည့်ပါ။ တကယ်တော့ Spring, Java EE တွေမသွားခင် Java Web Profile ကိုကောင်းမွန်စွာသိဖို့လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ။ တဖြည်းဖြည်းချင်း Skills Set ကို မြှင့်ယူ တာသာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ JUnit, Mocking, Selenium စတဲ့ Testing တွေ သိဖို့လည်းလိုပါတယ်။ Java သမားအတွက် JavaSE အရမ်းကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ Advanced Level တွေဖြစ်တဲ့ Memory Profiling, Web Performance, I/O Perfromance, CI (Jenkins) tool စတာတွေအများကြီး ဆက်သွားလို့ ရပါသေးတယ်။
Code Quality Analysing, Maven, Nexus, Git စတဲ့ အခြေခံ Knowledge တွေ ရှိနေသင့်ပါတယ်။ Web Services Programming ဖြစ်တဲ့ SOAP, WSDL, XML, RESTစတာတွေလည်း လေ့လာလို့ရပါသေးတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ Application Servers(Wildfly, GlassFish,...), Servlet Container(Tomcat, Jetty,...)တွေ Dev Tool (Eclipse, Intellij, Netbean,...)ကောင်းကောင်းမွန်သုံးတတ်ရင် Development Speed တွေမြန်နိုင်တယ်။
နောက်ဆုံး Production အနေနဲ့ Network Infrastructure ကောင်းကောင်းမသိရင်တောင်(PaaS, IaaS) Cloud Service Provider တွေဖြစ်တဲ့ Amazon EC2, Azure တို့ အခြေခံ Knowledges လေးတွေ ရအောင်လေ့လာသင့်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Web Profile လောက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Product ကောင်းကောင်းလေးတွေထွက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်ရဲ့ Organization or Team မှာ ဘာတွေနဲ့လုပ်နေကြလဲ၊ နောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ Technology Stack ကဘာလဲ ဘာတွေကိုသုံးရင် ပိုကောင်းလာမလဲ ပိုပြီးမြန်ဆန်လာမလား၊ ကိုယ့်ကကော သူတို့ကို ဘာတွေ Support ပေးနိုင်မလဲ Team Work ကသာအရေးကြီးတဲ့အတွက် တစ်ယောက်တည်းတိုးတက်တာထက်စာရင် အားလုံးတူတူအရည်အချင်းရှိလာနေပြီဆိုရင် Product ကောင်းကောင်းထွက်လာဖို့ သေချာတယ်လို့ထင်ပါတယ်။